Wararka - Immisa ka mid ah astaamahan dharka lagu dhaqo ayaad fahmi kartaa?
Immisa ka mid ah calaamadahan dharka lagu dhaqo ayaad fahmi kartaa?
1 Mashiinka dhaq
2 Mashiinka lagu dhaqo (saxafiga joogtada ah)
3 Mashiinka lagu dhaqo (wareeg tartiib ah)
4 Gacmo dhaq
5 Heerkulka biyaha oo aan ka sareyn 40C
6 Ha dhaqin
7 Ha u caddeynin wax caddeyn
8 Gubasho qalalan
9 Ha birin
10 Shabaq ha dhigin
11 Ha qallajin nadiif
12 Faleebo qalalan
In ka yar mid ka mid ah toddobadii qof ayaa si sax ah u aqoonsan kara astaamaha dhaqitaanka guud halka seddex meelood meel dadka Ingiriiska ahi ay qirtaan in aysan waligood hubin calaamadaha tilmaamaha.
Qaar ka mid ah tobankiiba toban ayaa qirtay inay haysteen alaab mashiin lagu maydhay oo ay ahayd inay u tagaan nadiifinta qalalan maxaa yeelay way ku guuldaraysteen inay eegaan calaamadaha.
Jaahilnimada ku saabsan sida dharka loo nadiifinayo waxay ku kici kartaa qoysaska kumanaan rodol, sida ku cad tijaabada tijaabada ah ee dadka guryaha leh ee bixiya dharka dugsiga ee Trutex.
Ragga ayaa ah dambiilayaasha ugu xun ee in ka badan seddex meelood (boqolkiiba 78) had iyo jeer isku barnaamij ku isticmaala mashiinka dharka lagu dhaqo iyadoon loo eegin tilmaamaha.
Ku dhowaad kalabar dumarka (boqolkiiba 48) waxay isticmaaleen seddex barnaamij ama wax ka yar.
Halka ku dhowaad iitobankii qofba (boqolkiiba 79) ayaa aaminsan inay tahay soo dejinqudhaanjada si loo hubiyo calaamadaha ku yaal dharkooda, in ka yar kalabar (39 boqolkiiba) ayaa fiiriya marka aad iibsanayso shay cusub.
Imtixaankii qaar ka mid ah tobankiiba toban ayaa sheegay in aysan ka warqabin in dharka qaarkiis aan lagu ridi karin qalajiye qallalan.
Kaawiddu waxay ahayd astaanta ugu fahamka badan si kastaba ha noqotee tobankii qofba lix ayaa si otomaatig ah u isticmaala uumiga kuleylka badan ayagoon hubin.
Haweenka badankood (boqolkiiba 90) waxay sheegeen inay leeyihiin ldhegtaned sida dharka loo dhaqo markay hooyooyinkooda ka caawinayaan sidii gabdho yar yar oo leh ku dhowaad dhammaan (boqolkiiba 95) kala saarida caddaanka iyo midabbada.
Tani waxay la barbardhigeysaa boqolkiiba 15 ragga kaliya oo caawiyey hooyooyinkood ama dhaqay linenka wasakhda ah markay guriga joogaan.
Mid ka mid ah afartii qof ayaa sheegay inaysan waligood fiirin tilmaamaha mid lixdii ka mid ahna weligii ma uusan isticmaalin mashiinka dharka lagu dhaqdo.
Guud ahaan in ka yar kalabar (47 boqolkiiba) dhammaan ka qayb qaatay daraasadihii 'badiyaa' sumadaha jeegga.
Matthew Easter, oo ah agaasimaha maamulka ee Trutex ayaa yiri: 'Cilmi baaristu waxay muujineysaa aqoon la'aan weyn marka ay timaado in la ogaado macnaha calaamadaha daryeelka iyo jaahilnimada muhiimadooda.
'Calaamaduhu way jiraan sidaa darteed daryeelka ugu fiican ayaa laga qaadan karaa dharka oo loo muujiyaa sida loola dhaqmayo.
'Macluumaadkan waxtarka leh wuxuu badbaadin karaa waqti iyo lacag wuxuuna hubinayaa dharka inuu sii dheeraado.